VaTekere Vanoitwa Gamba reNyika
Chikumi 09, 2011
Komiti yepamusoro soro yeZanu PF, kana kuti Politiburo, yapa vaimbove munyori mukuru webato iri, VaEdgar Tekere, ruremekedzo rwegamba renyika.
Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF, VaDidymus Mutasa, vanoti bato ravo raona zvakakodzera kuti VaTekere vaitwe gamba renyika. VaMutasa vatenda mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nekubvuma kwavaita kuti VaTekere vaitwe gamba.
VaMutasa vati VaTekere vainge vasina kutadzira kana ani zvake kunze kwekutadzira VaMugabe nenyaya yekudawo chigaro chaVaMugabe.
VaMutasa vati VaMugabe varegerera VaTekere nekuvaita gamba renyika.
VaMutasa vati kuti munhu anzi igamba renyika, zvinenge zvoreva kuti ose mabasa ane chekuita nemufi, anenge ava mumaoko ehurumende uye nebato reZanu PF.
Mhuri yekwaTekere inoti yatambira nemufaro ruremekedzo rwegamba renyika rwapihwa mufi kunyange hazvo VaTekere vakapika vachiri vapenyu kuti havadi kuvigwa ku Heroes Acre, vachiti kuzere vanhu vaiita zvehuori vachiri vapenyu.
Mutauriri wemhuri yekwaTekere, VaSteven Kada, vati vanotambira ruremekedzo urwu nemufaro.
Mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara, vatiwo VaTekere munhu anozivikanwa kuti akarwira nyika.
Ruremekedzo rwegamba renyika rwapiwa VaTekere runotevera chikumbiro chakange chaendeswa nevakuru veZanu PF vedunhu reManicaland chekuti VaTekere vapihwe ruremekedzo rwegamba renyika.
Kunyange hazvo Zanu PF yapa ruremekedzo rwegamba kuna VaTekere, bato iri range risingabatsire VaTekere panguva yehurwere hwavo.
VaTekere vakashaya nemusi weChipiri pachipatara cheMurambi Garden kuno kwaMutare mushure mekurwara negomarara.
VaTekere vakazvarwa musi wa-1 Kubvumbi 1938, vakabatsira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kubuda munyika vachienda kuMozambique muna Chikumi 1975 kunoenderera mberi nehondo yechimurenga.
Pakawana nyika kuzvitonga, VaTekere vakaitwa gurukota re manpower planning. Muna Nyamavhuvhu 1980, VaTekere vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya maneja wepapurazi raive kumucheto kweHarare, VaGerald Adams.
Nyaya iyi yakapinda mumatare edzimhosva VaTekere vachimirirwa negweta rekuBritain, Va Bloom Cooper, avo vakakwanisa kuudza dare kuti VaTekere vasawanikwe vaine mhosva yekuponda Adams parakapa mutongo waro muna Zvita 1980.
VaTekere vakadzingwa muhurumende naVaMugabe muna Ndira 1981, vakazovadzinga zvakare mubato muna 1988, izvo zvakazopa kuti VaTekere vavambe bato re Zimbabwe Unity Movement. VaTekere vakazosiya bato iri vachidzokera zvakare kuZanu PF.
Asi musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna Chikumi 2008, VaTekere vakatsigira mutungamiri webato reMavambo, VaSimba Makoni, vachiramba kutsigira VaMugabe.
VaTekere vasiya mudzimai wavo, Pamela uye nemwanasikana, Maideyi.